မအေးသောင်း ခေတ်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မအေးသောင်း ခေတ်…။
အော် အေးဝတ်ရည်သောင်း ကြီးပါလား ဟ။
ခင်ဗျာ အခုမှ ပေါက်ရရှာ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ဝုန်းဒိုင်းကိုကျဲလို ့
မအေးသောင်းမှ မအေးသောင်းဆိုသူတွေက မရှား။
ဒီနေ ့မအေးသောင်း ချစ်ခင်သူ လူပျိုကြီး
ဟော့ရှော့တွေ ဝတ် ဆိုသကိုး။
ဒင်းရဲ ့အကြည်ဓါတ်ပါတဲ့ ဘော်ဒီလေးနဲ ့
ဟော့ရှော့တွေနဲ ့မလိုက်ဖက်ဘူး ဆိုပဲ။
အခုမှ မြန်မာဆန်ဆန် အဝတ်အစားလေးတွေနဲ ့
အတင်းကြီးသိမ်းပိုက်သွားတာ ခံလိုက်ရ ဆိုပဲ။
အော် မအေးသောင်း ရယ်။
ပြီးတော့ မအေးသောင်း ဖွဲ ့ကဗျာလေးတွေကလည်း
မအေးသောင်း ကဗျာခေတ်လို ့ကို
လူသိခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားလောက်ပဲ
အခု မအေးသောင်း နာမည်နဲ ့ကျမှ
နာမည် တစ်ခုရဲ ့ပါဝါ လည်းပါသလို
မြန်မာဆန်ဆန် ရိုးရိုးဖက်ရှင်လေးတွေရဲ ့
မအေးသောင်း အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဟုတ်ကဲ့…ကျွန်တော် အေးဘလက်သောင်း ပါ ခင်ဗျာ။
( အေးဘလက်သောင်း )
ကုလားဆင်မျက်နှာလေး.. ဗမာဆန်ထားတာက စားသွားတယ်ထင်ပါတယ်..။
အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်းမသိ..။ . လွန်ခဲ့တဲ့.. ၁၅နှစ်လောက်ကတည်းက.. မင်းသမီးဖြစ်နေတာလို့.. မှတ်မိတယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၂ရ မှာ ၃၃ နှစ်ပြည့်သွားပြီတဲ့
ဘယ့်နှာ.. နာမည်ကြီးက.. အေးသောင်း ဖြစ်နေသလဲဆိုပြီး.. ဖဘမှာ ခဏခဏတွေ့နေတာ ဘယ်သူလည်း.. သတိမထားမိ..။
နောက်မှ.. မိန်းမဆန်တဲ့.. ဝတ်ရည်ကိုဖြုတ်ထားပြီး ခေါ်တာမှန်းသိတယ်..။
ကြည့်ရတာ.. အေးသောင်းဆိုတဲ့ ယောက်ျားနာမည်နဲ့.. ရုပ်ကလေးနဲ့.. အသက်နဲ့.. အကုန်ပေါင်းပြီး… ဆန်းပေသည့်လှရာသော်ဖြစ်သွားသလားမသိ..။
၄ဝ နား​တော့နီးပြီထင်​တာဘဲ။ ကိုယ်​​တွေလဲတခါတခါ ​နောက်​ကျ ကျန်​ခဲ့တယ်​ မတင်​ ညွန်​့လဲ မသိလိုက်​ မ​အေး​သောင်​းလဲ မသိလိုက်​လို့ Back date နဲ့ ပြန်​ရှာကြည်​့ရတယ်​။ သီချင်​း​လေး​တွေမှာ သရုပ်​​ဆောင်​တာ​တော့ လှသား။
@ ဦးလေးမန်း !!!
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၂ရ မှာ ၃၃ နှစ်ပြည့်သွားပြီ ခင်ဗျ။
​ကျေးဇူးပါ ကိုဘလက်​​ရေ ဘိုထီးအ​ခွေမှာ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့နှစ်​နဲ့ မှန်​းကြည်​့မိတာ အ​တော်​လွဲသွားတယ်​ သမီးကြီး အားနာစရာ။
အကြီးမ ဆွဲတာ…။ အကြီးမကို ပိုကြိုက်ခဲ့တာ…။ ပိုထက်လို့…
ခုတော့.. ဘယ်ဆီကို မင်းရောက်နေလဲ တောင် မသိတော့ဘူး…
အကြီးမ အင်္ဂလိပ်မှာ.. တဲ့..။ ယောက်ျားယူပြီး.. ဘိလပ်စစ်ဒဇင် ဖြစ်နေပြီထင်တယ်….။
သူ့ “စန်း” ကလည်း အံ့ဩဖို့ အကောင်းသား …
ဟိုးတုန်းကတော့ ကိုယ်တွေလည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ …
ခုတော့ ဖွဘုတ်ဘော်ဒါတွေတင်သမျှ ဝင်ကြည့်ပြီး ဂလုရတော့တယ် … ဂေ့
@ ဦးကျောက်ခဲ !!!
ဇွန်သဉ္ဇာ တို ့ဇာဇာထက်တို ့လို အဖေါ်အချွတ်တွေ
လုလု လို ခတ်ပါးပါး ဆက်စီပုံတွေ ကြားထဲက
မြန်မာဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့လူကြိုက်များလာတာကိုတော့
အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ ဝက်သားပေါင်းတွေချည်းဆိုတော့ လုံလုံခြုံခြုံ ငါးရံ့+ရဲယိုရွက် ဖက်ထုပ်ပေါင်းလေး ဘုန်းပေးချင်ကြမှာပေါ့လေ ။
ပြောရရင် သူကလေး စက်ဆီကျတုန်းကလည်း အာရုံမကျဘူး … ။
မြန်မာဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့မှ သူနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာ သဘောမျှပါကြောင်း…
အားလုံးဟာ ခဏလေးပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဖိုင်ဟောင်းတွေထဲ မွှေတာ.. ပုံတချို့တွေ့..။
ဆိုတော့.. ဒွေး, ဆုံးတုံးကပုံတောင်ပါသေး..။ ကျန်ပုံတွေကိုတော့.. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ မီဒီယာဖိုင်ထဲမှာကြည့်တော်မူကြဗျို့..။
သရုပ်ဆောင် လုပ်နေတာ မှတ်မိတယ်။
အထူးကြီး မကောင်းလှ။ အကြိုက်ကြီးထဲ မပါတဲ့မမ။
ကျနော်က ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆောင်တာကိုက လွဲရင်
ကျန်တာ ကြည့်/ အရသာ မရှိသလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
@ သင့်အေးရိပ် !!!
ဟင်​ ဒီ​ရောဂါ ​ပျောက်​သွားပြီလို့​အောင်​း​မေ့​နေတာ။
မအေးသောင်း … မအေးသောင်း
ဒီဒကာလည်း ထူးပြီးမနေချင်တော ့ဘူးကွယ်
အိုးကွယ် … ကိုယ်ပါလိုက်ပြီး ရူးပါရစေကွဲ ့
@ တောတွင်းပျော် !!!
အချက်ကို သတိထားမိစေတယ် ဗျ။
ရုံးမှာ ဦးအေးသောင်းဆိုတဲ့လူရှိတယ် ..
အခု မအေးသောင်းဆိုတော့ အဲ့လူကြီးမျက်နှာပဲမြင်ယောင်ပြီး ရယ်ချင်မိတယ် ..
အဲဒါ ကျော်ဟိန်းကွက်နင်းတာလို ့ထင်မိသဗျ။
ဗဒင်၊ ဗိုက်ကြီး၊ ဗအေး စသည်ဖြင့်
လူတွေခေါ်ရမှတ်ရလွယ်ပြီး စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိတဲ့
နာမည်မျိုးတွေ ကျော်ဟိန်းက သူ ့ဇာတ်ကောင်နာမည်
မှည့်လေ့ရှိတယ် မဝေရေ။ အခု မအေးသောင်း လိုပေါ့။
အူးဘလက်ရေ သူ့ကို ၃၇၊၈လောက်ရှိပြီထင်နေတာ
@ နန်းတော်ရာသူ !!!
၂၀၀ဝ ခုနှစ်က ၁၆ နှစ် လောက် ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါသဗျာ။
@ ဂျစ်စူ !!!
သူ အစက ဝသေးတယ် ထင်တယ်.. diet plan တွေဘာတွေ လုပ်တယ်.. သူ့ဂရုထဲမှာ ရုံးက အစ်မတစ်ယောက်ရှိလို့ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်..
မြန်မာဝတ်စုံဆိုတာ သူ့လိုပုံစံလေးနဲ့မှ လှတာ.. အေးမြတ်သူဝတ်တုန်းကလည်း လှတာပဲ..
တစ်နေ့ မအေးသောင်း ဖြစ်ရမည်. ဟိဟိ
@ လုံမလေးမွန်မွန် !!!
ဖြစ်ရမှာပေါ့ မအေးမွန် ရယ်။
@ အေးကြီးမိုက်သောင်း !!!
နာမည်လေး က ချစ်စရာလေး ။
ဟို​နေရာလည်​း မ​အေး​သောင်​း …
ဒီ​နေရာလည်​း မ​အေး​သောင်​း …
ခများတို့ ဂွဇက်​မှာလည်​း မ​အေး​သောင်​း ​နေပါပြီ​ကော ….
​အောင်မာ … ​ရေးတဲ့လူက​တောင်​ သူ့ကိုယ်​သူ အေးဘလက်​​သောင်​း ​လေး ဘာ​လေးနဲ့ .. ​ဟေ​ဟေ့ ..
@ အံစာတုံး !!!
မအေးသောင်း အကြောင်း လာမပြောနဲ ့
ဗမာက.. ဗမာအဝတ်အစားနဲ့မှ လိုက်တယ်..။
ဗမာအမျိုးသမီးတွေက.. ရင်သေး.. တင်ကြီးသဗျ..။
ဘယ်လ်ဂျီယံသူက.. ဗမာအဝတ်ကောက်ဝတ်တော့.. ရင်ထွား.. ခါးအလျှားတိုတော့ အကျီ င်္က.. ဟနေ..။
တင်ပဆုံရိုးသေးတော့.. ခါးသေးတာမပေါ်.. အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်ရော..။ မျက်နှာက ဘယ်လောက်လှလှ.. တကိုယ်လုံးကျ.. စံချိန်ကျရော..။
သဘောက.. မြန်မာအမျိုးသမီးသည်.. မြန်မာအဝတ်အစားနှင့်.. ဆက်စ်စီအဖြစ်ဆုံး..။
မှန်၏ … သာမန် မြန်တျန့်လေဒီတွေကို ဖော်ရိန်နာများ မှတ်ချက်ပေးတာက…
“အရပ်အမောင်း စံချိန်မမှီ … အောက်ပိုင်း ဖရိန် စံလွန်သော်လည်း… အပေါ်ပိုင်းကတော့ အောင်မှတ်တောင်မရတဲ့ ။ အသားအရည်နဲ့ မျက်နှာကျကတော့ ကုသလနဲ့ စိန စပ်ကျထားသလား မှတ်ရတယ် … မျက်လုံးမျက်ဖန်လှပြီး ညိုဝါဝင်းပါသတဲ့”
“ပြည်ကြီးက စိနတွေကျတော့ ခါးရှည် အောက်ပိုင်းတို ခြေသလုံးတုတ် အသားအရည် ဖြူဖတ်ဖြူရော် ၊ ရေရှည် သုံးစားလို့မကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ” ဆိုပဲ
သူတို့ ရိုးရာအဝတ်အစားနဲ့သာ အလိုက်ဆုံး ခည။
ရိုးရာဝတ်စုံက များသောအားဖြင့် ဖုံးတန်တာ ဖုံး ဖော်တန်တာ ဖော်ပေးပြီးသာရယ်။
ရှင်းသွားတာဘဲ မရှင်းရင် စာရီခြုံကုလားမတွေမျက်လုံးထဲမြင်ကြည့် ကွက်စတိရယ် :P:
မအေးသောင်းဆီ ဒီ တစ်ပတ်မှ သွားကြည့်ရတယ်။
ကိုယ့် အူးလေးတွေ အကိုတွေ အပြောများလွန်းလို့။
ကွန်းမန် ့လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ဇီဇီရေ ။
အကိုတွေ မောင်တွေ တူတွေ အပြောများလို့ မအေးသောင်းလေး ပြေးကြည့်မိတယ်။
အခု သူဘာကြောင့် ပြန်စန်းပွင့်လာတယ်ဆိုတာကို ဝေဖန်ကြတာ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် အဝတ်လေး လိုက်လို့၊မျက်နှာလေးက လှလို့ ဘာညာဘာညာ ဘလာဘလာတွေ ပြောကြတယ်။
သူ့ဓာတ်ပုံလေးလှရုံ သူ့ အဝတ်အစားလှရုံ သူ့ကိုယ်လုံးလေးလှရုံထက် တင်တဲ့ ပုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စာသားလေးတွေရယ် သူ့ပရိသတ်ကို တုံ့ပြန်တဲ့ reply comment လေးတွေရယ်က သူ့ကို နာမည်တက်အောင် လုပ်ပေးတယ်လို့ မြင်တယ်။
အခြား မော်ဒယ်တွေ မင်းသမီးတွေလည်း တင်နေတာပဲလေ။ သူ့လိုမှ ကျားမ အရွယ်စုံ ချစ်စရာ မဖြစ်သွားတာပဲ။
(မနှိုင်းသင့်ဘူး ထင်ချင်ထင်ကြမယ်။ ကျမကတော့ FB ထဲ ကျမသွားသွားကြည့်နေမိတဲ့ မျောက်မလေး မေရီကို သတိရတယ်။သာမာန် ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရင် အဝတ်အစားဝတ်ပေးထားတဲ့ မျောက်ကလေးလို့ပဲ မြင်မှာ၊ဒါပေမယ့် သူ့ မွေးစားအမေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရေးအသားလေးတွေကြောင့် မျောက်မလေး မေရီဟာ လူချစ်လူခင်များပြီး ရုပ်သံသတင်းထဲတောင် ဗျူးယူရတဲ့ အဖြစ်ရောက်သွားတယ်၊)
မအေးသောင်းကလေးကိုလည်း သူ့အလှ သူ့ကိုယ်လုံး သူ့စန်းမှာ တင် ရပ်မထားကြပါနဲ့၊
သူ့ဦးနှောက် သူ့အရေးအသား သူ့ပရိသတ်ပေါ် လေးစားမှု လေးတွေပါ မြင်ပေးကြပါလို့။
ရေးလာသမျှ ကော်မန့်တွေကို .. အကုန်ဖတ်ပြီး.. ပြန်သင့်သူကို ပြန်နေတာရယ်..။ ပြန်စာတွေရယ်က..” စန်း” ကိုလုပ်ယူသွားတာပေါ့..။
ပြောသာပြောတာ .. ဒီဓလေ့က.. ဂဇက်ထဲကျ.. ရှိပြီးသား..။
ဟုတ်တာပေါ့ အစ်မရေ ။